Mahay kanetibe ny malagasy – Malag@sy Miray
Dray dray dray, ohatra ny midoka tena be raha miresaka mivantana hoe mahay kanetibe ny gasy. Aleo aloha ahitsy hoe misy ireo malagasy vitsivitsy no havanana amin’ny lalao kanetibe na « pétanque » izany. Amin’izao fotoana izao mantsy dia misy ireo delegasiona nalefa mba hiaro ny voninahitry ny firenena, mba hamiratra fa tsy ho toy ny mpanao adilahy politika manamaizina sy manamaloka ny ho avin’ireo malagasy maro tsy mahita ny lalana haleha.Raha fanatanjahantena aloha no resahina dia efa mba namiratra tsy indraindray ny malagasy, indrindra fa raha lalaon’ny nosy no asiana teny. Izany mpanao kitran’ny saint Michel izany dia fanta-daza teo aloha, ny kick boxing tsy vao ela dia fianakaviana iray manontolo mihitsy no nitondra avo ny lazan’ny nosy; ny boxe savate, ny Tae-kwon do WTf dia namiratra nanerana ny Afrika isika ary nisy fotoana dia toy izany koa ny taranja tennis.Araka ny voalaza tetsy aloha dia tafiditra anisan’ireo firenena mahay « pétanque » – na « boule » hoy ny filazantsika azy – i Madagasikara. Mahafinaritra satria tsy vao izao izany fa efa elaela ihany. Toa arakaraka ny tsy fisian’ny minisitry ny fanatanjahan-tena sy ny tanora no vao mainka ahitana vokatra tsara…Mila mamiratra ny malagasy, indrindra eo amin’ny lafiny iraisam-pirenena fa indrindra indrindra koa eo anivontsika tsirairay avy mba manome aina vao sy ohatra azo alain-tahaka ho fanatsarana ny ho avin’ireo tanora sy ny zaza ankehitrio. Fanatanjahan-tena aloha izao no hita fa misy vokatra, ny zava-boahary ihany koa dia mampalaza antsika saingy tsy ampy fa mila vokatra hita sy tsapa fa nanaovana ezaka. Ohatra : fambolena tsara kalitao, harena an-dranomasina tsy misy toa azy, zava-kanto tsara sy miavaka, sns mba samy miezaka sy mikaroka ny tsirairay dia atambatra ny vokatra tsara hita mba ho fananam-pirenena e!
sao de diso lohateny ity lahatsoratra ity. Misavona ambony ambany tsy fantatra intsony na kanetibe, na politika, na fanatanjahantena amin’ny ankapobeny.
Tsy politika aloha fa resaka zavatra tsara mety mampiavaka ny malagasy. Teo aloha teo dia ny kanetibe no nampiresaka ny maro tany ivelany tany ka tsara entina atao ohatra ho an’ny taranja hafa ary ho an’ny raharaha hafa rehetra izay mba mety hampanjelatra an’i Gasikara.
Efa leo resaka politika izay miady rima amin’ny fikafika sy adin’alika mantsy ny tena ka aleho mba fijery mitraka indray no jerena e, sa ahoana hoy ianareo?